शीतलनिवास निगाहको विषाक्त सत्ता - नेपालबहस
शीतलनिवास निगाहको विषाक्त सत्ता
| १०:५८:४१ मा प्रकाशित
२३ जेठ, काठमाडाैं । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान केपी ओलीलाई प्रतिनिधिसभाले विश्वास गरेको छैन् । केवल महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कृपादृष्टिले उनको पद कायम छ । संसदीय व्यवस्थाको यो भन्दा भद्या मजाक अरु के पो होला र ?
संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत बनाइएका प्रधानमन्त्रीले आफूखुशी धारा ७६(४) लाई नाघेर आफूखुशी धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्दा राष्ट्रपतिले ठप्पा लगाइन् । यसबारे व्याख्या गर्न सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाईको क्रम थालिएको छ । यसको निरुपण त पक्कै आफ्नै ढंगले होला नै । तर आफैंले निर्वाचन मिति घोषणा समेत गरेका ओली भने मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरिरहेका छन् ।
संविधान, परम्परा र अभ्यास ओलीका लागि थाङ्नो भइसकेको छ । लुई १४ औं जस्तै ओली जे बोल्छन्, त्यही कानून बन्न थालेको छ । सबै निकाय रमिते बनेका छन् । ओलीले पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषदमा भित्र्याएका अनुहारले धेरै प्रश्न र जिज्ञाशाको उत्तर दिएको छ । ओलीको राष्ट्रवादको मुखुण्डो उघ्रिएको मात्र छैन , अपितु नियत र नियतिसमेत उजागर भएको छ । ओलीको रोडम्यापसमेत अब नेपाली जनताले प्रष्ट अनुभूति गर्न पाएका छन् ।
संसदीय लोकतन्त्रमा सामान्यतः निर्वाचनपछि सरकार बन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता अनुसार मन्त्रिपरिषदमा फेरबदल गर्छ । ओली त अझ दुई तिहाई नजिक रहेका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए । त्यसैले उनका लागि पटकपटक पुनर्गठन गरेर सत्ता जोगाउनुपर्ने बाध्यता थिएन । तर भयो उल्टो । ओलीले आफ्नै दलको विश्वाससमेत जित्न सकेनन् । त्यसैले संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक उनले आफ्नो कार्यकालमा डेढ दर्जन पटक पुनर्गठन गरे । फेरि पनि अर्काे पुनर्गठनको तयारीमा छन् उनी । यो त संसदीय लोकतन्त्रको उपहास नै हो ।
लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको शासक नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने हो । ओलीका हकमा भने यो नियम न त लागू भएको छ, न उनको विश्वासको आधार नै बनेको छ । किनभने ओलीमा नागरिक , पद्धति र जवाफदेहिताप्रति न त कुनै सरोकार छ न मतलव । त्यसैले उनी मनमौजी गर्दैछन् । पटक पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ल्याकत उनमा छ । किनकी ओलीसँग खल्तीको मकै भटमास जस्तै राष्ट्रपति छन् । जतिबेला भोक लाग्छ, झिको खायो । ओलीलाई नियम कानून र परम्पराको कुनै दरकार नै छैन ।
पछिल्लो पटक पुनर्गठन गर्दा उनले छानेका केही पात्रको चर्चा गरौं । सबैभन्दा पहिला त उनकै पार्टीबाट उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्री बनाइएका रघुवीर महासेठको हैसियत हेरौं । यसअघि पनि ओलीले महासेठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनाइएका थिए । मन्त्री पदमा रहँदा उनले ठेकेदार र कर्मचारीसँग खुलेआम असुली गरेको भन्दै ठूलै बदनामी भएको थियो । ओलीले बनाएको कार्यक्षमता मूल्याङनमा कमजोर भएको भन्दै उनलाई हटाए ।
महासेठ पदमुक्त हुँदा उनकै निर्वाचन क्षेत्रका जनता र कार्यकर्ताले दीपावली गरेका थिए । त्यति बद्नाम भइसकेका थिए महासेठ । तर लामो समय टिक्न सकेनन् । यसअघिको पुनर्गठनमा ओलीले महासेठकी पत्नी जुलीकुमारी महतोलाई भित्र्याएका थिए । अहिले महासेठलाई फेरि बिना आधार ल्याए , त्यो पनि परराष्ट्र जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा । किनभने महासेठमार्फत ओलीले शक्ति केन्द्र रिझाउनुपर्ने अवस्था थियो ।
ओलीले दोस्रो पटक भित्र्याएका अर्का मन्त्री हुन् – शेरबहादुर तामाङ । प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै ओलीले माधव नेपाल पक्षको सिफारिशमा तामाङलाई कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । तर बंग्लादेशमा एमबीबीएस पढ्ने नेपाली छात्राप्रति दुव्र्यवहार हुने गरेको र नेपाली चेलीले स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उनलाई ओलीले नै पदमुक्त गरेका थिए ।
अहिले उनी फेरि भित्रिए त्यो पनि स्वास्थ्य जस्तो गहन र महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर । यसबीचमा तामाङले राम्रो के गरे नेपाली जनतालाई ज्ञात भएन । तर ओलीका लागि भने ठूलै गुन लगाए । माधव नेपाल क्याम्प त्यागेर ओलीको गोठालो बन्न पुगे । त्यसबापतको यो पारितोषिक मात्र हो । तामाङपत्नी उषाकिरण राईले पनि पुरष्कार पाएकी छन् – प्रदेश नं. १ मा मन्त्री बन्ने । ओलीलाई सघाएवापत लोग्ने स्वास्नी नै मन्त्री बन्न पाउने अवसर पाएको छ तामाङ दम्पतिले ।
अब अर्का पात्रको पनि चर्चा गरौं –उपप्रधानसमेत बनाएर शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका राजेन्द्र महतो । कुनै बेला थियो – ओली र महतो नदीका दुई किनारा । ओली कट्टर राष्ट्रवादी महतो राष्ट्रद्रोही । अहिले यी दुबै किनाराको मिलन कसरी भयो ? आन्द्रो गाँस्ने काम कसले ग¥यो ? धेरै चर्चा गर्नै पर्दैन ।
ओली मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश गर्ने वित्तिकै महतोले दिएको अधिव्यक्तिले देशमा तरंग उत्पन्न भएको छ । नेपाल वहुल राष्ट्रसहितको हुनुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि नयाँ आन्दोलन थाल्ने उद्घोष गर्दा ओली मौन छन् । त्यसको रहष्य पनि खुल्न थालेको छ । सत्ताका लागि ओलीले गर्ने व्यवहार र शैलीको जति बद्ख्याईं गरेपनि कमै हुन्छ । एकपटक सत्तासिन भएपछि अनन्तकालसम्मका लागि रहने उनको मनसुवा देखिएको छ । आफ्नो सत्ता टिकाउन ओलीले जस्तोसुकै अपराध कर्म गर्न पछि नहट्ने संकेत गत वर्ष बैशाखमै दिइसकेका थिए ।
उनले समाजवादी पार्टी फुटाउन त्यतिबेला अध्यादेश नै ल्याएका थिए । तर मधेसी नेताहरुको रातारातको मिहनेतले पार्टी विभाजन रोकियो । अहिले ओलीले संसदीय प्रणालीका अर्काको दल विभाजन गर्न खोज्नु अपराध हो भन्न थालेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले र जसपामा विभाजन ल्याउन खोजेको उनको आरोप छ । जबकी जसपा फुटाउन नै उनले महतो पक्षलाई सत्ताको चास्नीमा डुबाएका छन् । ओलीकै यो रणनीतिले अब जसपा फुट निश्चित भइसकेको छ ।
प्रष्टै छ, भारतीय संस्थापन पक्षलाई खुशी बनाउन ओलीले यो पासा फ्यालेका छन् । अखण्ड नेपाल विरोधी स्वरलाई बल प्रदान गर्ने हेतुले महताले बोलेका छन् । महतोको एकल स्वर होइन त्यो । त्यसका पछाडि चुरे दोहनदेखि नागरिकता प्राप्तिसम्म गाँसिएको छ । ओली त्यही अभियानका अदृश्य पात्र मात्र हुन् । ढिलो चाँडो यो यथार्थ समेत नेपालीजन समक्ष खुलासा हुने छ ।
ओलीको कालो छायाँमा परेको लोकतन्त्र ३ घण्टा पहिले
ओलीको चालमा रन्थनिएको एमाले २४ घण्टा पहिले
महन्थ ठाकुरपक्षीय ९ मन्त्रीलाई ७ दिने स्पष्टीकरण २ दिन पहिले
ओलीले डाके स्थायी कमिटी, माधव समूहलाई समेत आमन्त्रण २ दिन पहिले
जेठ २ मा फर्कन ओली तयार, नेपाल पक्ष पनि नयाँ रणनीतिमा २ दिन पहिले
पहिरोले करिडोर अवरुद्ध १ मिनेट पहिले
बाढी प्रभावितको उद्धार र राहतमा जुट्न तरुण दलको निर्देशन २ मिनेट पहिले
सडकका किनारामा तरकारी बिक्री गर्दै महिला ५ मिनेट पहिले
बेनी बजार कटानको उच्च जोखिममा ८ मिनेट पहिले
के भएको हो झलनाथलाई ? १९ मिनेट पहिले
राष्ट्रपतिको खोप कुटनीति निश्प्रभावी, धेरै राष्ट्रले पत्रको जवाफ समेत फर्काएनन् २१ मिनेट पहिले
स्याङ्जाको दभुङठाँटीमा जीप दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु ३० मिनेट पहिले
मेलम्ची क्षेत्रमा उद्धारका लागि अखिल र युवा संघको टोली परिचालन ३३ मिनेट पहिले
निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि सहज बन्दै बाँकेको जनजीवन ४२ मिनेट पहिले
गण्डकी प्रदेश सरकारले शुक्रबार विश्वासको मत लिने ४५ मिनेट पहिले
बेलाघाट टापुमा फसेका चारको सेनाले गर्यो उद्धार ५० मिनेट पहिले
कुमारी बैंकको शेयरमा खरिद माग उच्च, शेयरमूल्य कति ? ५३ मिनेट पहिले
उपचारको आशमा पूर्वलडाकु परियार ५८ मिनेट पहिले
खानीखोला हाइड्रोसहित तीन कम्पनीको शेयरमूल्य उच्च दरले वृद्धि २३ घण्टा पहिले
द आर्ट अफ लिभिङद्वारा स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण २३ घण्टा पहिले
शक्तिशाली स्पेस लन्च सिस्टम एसएलएस रकेट पहिलो पटक सार्वजनिक २ दिन पहिले
मनाङे मन्त्रीपदबाट पदमुक्त ५ दिन पहिले
कोरोना संक्रमणबाट पत्रकार बाँस्तोलाको निधन ६ दिन पहिले
पूर्वमन्त्री पहाडीद्वारा डोल्पामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरसहितका सामग्री सहयोग ३ हप्ता पहिले
एनआईसी एशियाका खाता अनलाइनबाटै कनेक्ट आईपीएस ‘भेरिफाई’ गर्न सकिने २ हप्ता पहिले
नेशनलमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्तवित्तीय संस्था लिमिटेडको संस्थापक शेयर बिक्रीमा ३ हप्ता पहिले
सिटिजन्स बैंकको स्वतन्त्र संचालकमा ज्ञवाली नियुक्त ४ हप्ता पहिले
सिमकोटलाई आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालमा जोडिने २ हप्ता पहिले
राजनीतिक समस्याको सही समाधान हुनेमा आशावादी छुः उपराष्ट्रपति ३ हप्ता पहिले
कोरोना महामारीमा पूर्वमा तस्करी मौलायो, सशस्त्रका डीआईजी दाहाल सेटिङमा मस्त ३ हप्ता पहिले
नाइजेरियामा बन्दुकधारीहरुको आक्रमणमा परी ८८ जनाको मृत्यु १ हप्ता पहिले
दुर्घटनामा एकको मुत्यु, तीन गम्भीर घाइते १० महिना पहिले
१३७ औं समूहको ट्राफिक नियन्त्रण तालिम समापन ६ महिना पहिले
विश्वकप छनोटको खेल तालिका सार्वजनीक ६ महिना पहिले
विहार भत्काएर भवन बनाउन खोजेपछि गुठियार आन्दोलित २ वर्ष पहिले